Ny vovoka mika synthetic ho an'ny kosmetika dia mandray ny flakes mika sentetika ho akora fototra, ny flakes rehetra dia voafantina tsara alohan'ny famokarana mba hahazoana antoka fa mifanaraka ny loko sy ny fitoviana. Ny vovo-dronika mika synthetic ho an'ny kosmetika dia novokarin'ny Teknolojika fitotoana rano mifono pataloha Huajing. Tsy misy simika sy fandotoana ao anatin'izany.
zavatra loko fotsifotsy (Lab) Haben'ny potika (μm) D50 pH Hg (ppm) As (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) mositure （%） tahan'ny lafiny hakitroky marobe g / cm3 famirapiratana Fampiharana
HC400 fotsy ≥96 20 F23 7 F. 8 F1 F1 F1 F1 ＜ 0,5 150 0.22 Matte & mamiratra Fitaovana metaly tsy mavesatra, fisaronana mangarahara avo sy hatsaran'ny hoditra fotsy,
HC800 fotsy ≥96 10 ～ 13 7 F. 8 F1 F1 F1 F1 ＜ 0,5 180 0.14
HC2000 fotsy ≥96 5 ～ 7 7 F. 8 F1 F1 F1 F1 ＜ 0,5 140 0.11
mihinana fanoherana loko Ny hamafin'i Mohs fanoherana ny habetsahana resistivity ambonin'ny (Ω) Teboka mitsonika tanjaky ny puncture hafotsiany hiondrika
1100 ℃ Silver 3.6 4.35 x 1013 / Ω.cm 2,85 x 1013 1375 12.1 > 92 F45
fotsy KV / mm R475 Mpa
Ny vovoka mika synthetic ho an'ny kosmetika dia mandray ny flakes mika synthetic ho akora fototra, ny flakes rehetra dia voafantina tsara alohan'ny famokarana mba hahazoana antoka fa mifanaraka ny loko sy ny fitoviana. Ny vovo-dronika mika synthetic ho an'ny kosmetika dia novokarin'ny Teknolojika fitotoana rano mifono pataloha Huajing. Tsy misy simika sy fandotoana ao anatin'ilay fizotrany .ka ahazoana antoka fa azo zahana amin'ny vovoka mika miaraka amina haben'ny zana-tsokajy sy gloss tsy miovaova ny sombin-kazo kristaly avo lenta. Ny tombony manokana anaovany ny vokatra farany dia misy fotsifotsy avo sy tsy fitoviana ambony, tsy misy singa vy mavesatra na zavatra manimba. Izy io dia manome antoka fa afaka manova ireo vokatra kosmetika malaza indrindra ianao. Ny vovoka mika sythetic dia mety amin'ny rafitra loko mifanohitra avo, toy ny matte, mercerized ary manasongadina. Izy io no akora tsara indrindra amin'ny vokatra kosmetika avo lenta.
Inona no fananana manokana ananan'ny Powder Mica Cosmetic?
Ny mika amin'ny tany mando dia misy fitoniana simika tsara. Ny mika amin'ny tany mando dia misy sombiny tsara, fanoherana asidra sy alkaly, fanoherana fahanterana ary fiasan'ny fiarovana tsara amin'ny taratra ultraviolet. Taorian'ny fanamasinana lena, ny fotsony, ny hery afeniny, ny famirapiratana, ny malama, ny fanaparitahana ary ny fametahana dia nohatsaraina be. azo afangaro amin'ny rano sy glycerine izy io, ary milamina sy malefaka ny endriny. izy io dia ny akora voalohany amin'ny kosmetika hatsaran-tarehy avo lenta ary ny akora ilaina amin'ny fototra fanatsarana tarehy, ary azo ampiasaina ho emulsion, crème, agents pearlescent ary akora hafa.
Ny effets manokana sy ny fiasan'ny mica synthetic amin'ny kosmetika
Ny fluorophlogopite synthetic dia karazana fitaovana kristaly tsy mitongilana vaovao izay manafaka ny mineraly ny mika voajanahary. Tsy ny fahombiazan'ny mika voajanahary ihany no ananany, fa koa manana fahadiovana avo sy fotsy fotsy, ary avo kokoa noho ny an'ny mika voajanahary ny fahombiazany. Ny fitaovana dia an'ny silicate, lamellar, hexagonal crystal material. Miaraka amin'ny famirapiratany dia azo atao endrika tsy mamirapiratra ihany koa. Amin'ny kosmetika dia ampiasaina indrindra izy ho loko fandokoana hampitomboana sy hanampiana ny famirapiratry ny tarehy, izay hampitombo ny firafitra sy ny fikasihan'ny hoditra. Tsy ho tototry ny hoditra, satria ny mineraly dia tsy hiteraka fahavoazana amin'ny hoditra, indrindra hanatsarana ny vokatra mamirapiratra mamirapiratra.
Fahaiza-mamokatra: 150tons / volana
Fonosana: 40KG / 25KG / 20KG, (kitapo PP na PE)
Fomba fitaterana: kaontenera na be
Teo aloha: Vovoka mika pearlescent
Manaraka: Vovoka mika voajanahary Muscovite
Makeup mamirapiratra miaraka amin'ny Mica synthetic
Fanamafisana Mica synthetic
Sheet Mica synthetic